DEG DEG+DAAWO: Jubbaland oo maanta shaacisay Heshiiskii ay lagashay DFS, Xili PTIMES sii sheegtay 3 maalmood kahor.
July 24, 2020 NEWS 9
KISMAAYO(P-TIMES)- Madaxtooyada Jubbaland ayaa maanta baahisay macluumad-ka ku saabsan Heshiis is afgarad oo dhexmaray dawladda Faderaalka Soomaaliya & Madaxda Jubbaland, kaas oo ku saabsanaa arrimaha dhinacyada u dhaxeeyey sidii xal waara looga gaari lahaa.
Warsidaha PuntlandTimes ayaa xogtan shaaciyey 3 maalmood kahor, markii uu soo dhamaaday kulan gaar ah oo ay lahaayeen Madaxweynaha Soomaaliya, Madaxda Jubbaland & Puntland, kuwas oo diiradda lagu saaray arrimaha muhiimka ah.
Jubbaland, maanta waxay shaacisay dhammaan qodobadii uu warsidaha Puntlandtimes horey ugu soo gudbiyey Akhristayaashiisa oo aysan waxba ka maqneyn, dhammaan qodobada ayaana la xaqiijiyey in laga wada hadli doono dhameystirkooda ka hor shirka 3aad ee nagu soo wajahan ee ay leeyihiin madaxda dawladda Faderaalka & Dawlad gobaleedyada.
Qodobada heshiidka dhinacyada waxaa kamid ah.
Gedo waxaay Jubaland u tahay intan oo Calaamadood. Isir, Halka aay ku taalo, Luuqadda looga hadlo iyo Siyaasadba.
Taasna Farmaajo oo Galgaduud ka soo jeedo oo Gedo in uu wax yeelo meeyee aanan wax wanaag ah u gelin weligii, waxba laga weeydiin maayo.
Axmed Madoobana waxaan leeyahay, ninkani Axdi iyo Ballan midna ma xeeriyee, waligaa ha aaminin!!
Haddii uu qofku waayo tabar uu kugu wax yeelleeyo, oo uu ku yiraahdo waan ku cafiyey, ku muusan cafin ee tabar buu kuu waayey!
Soomaalidana waxaa ku sifeeysay arrinkaa oo kale, Samir Taacibi Waa!!
QOF KU CAFIYEY MARKII WAX KAA QAADI WAAYEY!!!!
Ninkan afar sano oo uu Madaxweyne ahaa, Jubaland oo aay Gedo ugu daran tahay, in uu wax yeelo mooyee wax kuma sheegto!
Bale xitaa yuusanba wax tarine, dhibkiisa kama daaysan!!!
Axmed madoobe xagee ka yimid, Jubaland? Cadaaladda ha ka fogaan!
Tagoogada markuu kugu qunsaday eed Tolkaa marisey!
Ma kaa Tagey xigaalkii dhul buu nabad u Tuurraaye!
Adiguna Tawaawac iyo ciil Taah ma ladi weysay!
Ma haddaad Tabeeysaa raggaad Toorrey ku idleeysay!
Cali Dhuux oo ku digtay Ismaaciil Mire oo cidlo ku soo dhacay, burburkii Daraawiish kadib. Isaga oo ugu duur xulay, in uu Sayiidkii uu Dhulbahante dartii u baabi’iyey uu duur kaga dhaqaaqay oo uu dhex tagey Ogaadeen oo nabad ah.
Waxaa taa shabbaha, Farmaajihii 4 sano Daarood dhan kasta ka baabi’iyey ee uu hadda waagu ku baryey iyo Khayrihii 4ta sanaba Deegaankiisa ka dhistay, wixii Soomaali ka dhexeeyey oo hadda Dabbaal degaya!!
TACSIDII 4 SANO KA HOR LA DHIGAY PUTLAYN BAA WALI TAALA!! FARMAAJO COLAADA UGU BADAN BUU KALA KULMAY DAAROOD HAL SABAB DARTEED MAJEERTEEN MA TIHID, 2001 BAA ODAY AAD LOOGA YAQAAN PUTLAYN BAA LA YIDHI MAXAAD UDIIDAN TIHIIN INAAD JUBOOYINKA ABSAME U DHAAFTAAN WAA KISMAAYEE, WUXUU KU JAWAABAY HADAANU OGAADEEN KISMAAYO U DHAAFAYNO SIYAAD BARE XUKUNKA KUMA QABSANEEN, MARKA HADANA CIDI MA HESHIIN, BOORAAN AFKII LAGA QAFILAY QABARNA HOOSEEYO MAANAA LAY QARSHAA MIDIYO, LAYGU QALI DOONO. WAA HESHIISKA DHUUSAMAREEB..
Qodobka 2 iyo 3daa siday u jecel yihiin ayay u qorteen.
Tan Gedo FARMAAJO Gedo yaa ka xiga haddiba mid kililka ka yimid uu ka yahay hogaamiye?
Sidoo kale kan hadda barasaabka la ah xaggee ka yimid?
MACALIMO qoyskiisa 1980 ayay yimaadeen Gedo kana yimid Nagayle,aabihiis au bishii Jun ayuu ku dhintay Nagayle.
Farmaajo Jubaland iyo Gedo cidda ka xigtaa yaanay ashuun ku adimine ha sheegto.
TUUG ISKA YEELYEELAYSA REER GEDO WAAN NAQAAN.
Xukuumada farmaajo markii ay axmed madobe coloben gobalka gedo waxay ka sameysay dhaqdhaqaaq ka duwan gobalada kale ee jubaland tolow sababtu waa maxay?
Farmaajo markii ay axmed madobe coloben gobalka gedo wuxuu ka sameeyey habab ka duwan gobalada kale ee jubaland sababta waa maxay
Horay ayaan waxaan kuu iri, meeshan sida Askeri Waardiye ah ha u dhex fadhiyin oo dadka afkoodu ha dhowrine, haddii aad wax caqli ah haayso fekerkaaga ku gudbiso!
Haddii aan u soo noqdo arrimaha ku saa San, Farmaajo iyo Macallimow ee aad ja hadashay.
Farmaajo: Farmaajo Reer Gedo isaga iyo Aabbihii midna ma noqon oo waxaa caddeyn iyo fasiraad u ah, ficilladiisa iyo Taariikhdiisu!
Farmaajo waa nin uu Aabihiina ka soo jeedo, Galgaduud oo isna Muqdisho ku dhashay, ficilkeedana wuu ka muuqdaa!
Farmaajo intii uu Soomaaliya xil u hayey wuxuu booqasho ku tagey. Jubada Hoose. Sh. Hoose. Hiiraan. Galgaduud oo uu ka soo jeedo oo markii labaad ah, oo aay ku jiraan, Cabuudwaaq iyo Balaballe oo aay jifadiisa degto. Mudug. Nugaal. Boosaaso, Bari iyo ugu dambeyn, Baaydhabo.
Laakiin gobolka Gedo oo ah, gobolka 2aad ee Soomaaliya ugu weyn, beesha Mareexaan ee uu leeyahay waan ka dhashayna aay 80% halkaa degto, weligii cag ma dhigin, waxa uu tarayna waxaay noqotay. In uu geeyo Mooryaan uu meelahaa ka soo aruuriyey oo aay hoggaaminayaa, niman jifo hoosaadkiisa ah oo Gabdhihiina ka kufsanaya, noloshii yareyd ee aay Hay’adaha Gaalada ka Heli jireena ka kala daadiyey!
Isaga oo weliba dadkii Reer Gedona dekano dhex dhigay oo laga baqayo maanta, in uu ja dhex qarxo dadka Gedo dagaal sokeeye oo lagu hoobto, Marka uu Kursigu banneeyo!
Macallimow: Tan halka uu ka soo jeedo, waa nin Reer Gedo ah oo Mareexaanka ku dhaqan Gobolka Liibaan ee Itoobiya iyo kan ku dhaqan Jubooyinkaba waa, dad markoodii hore Gedo ka tagey, haddii aay ku soo noqdaana waa un Reer Gedo soo guryo noqday.
Tan Guddoomiyaha aad ku sheegayn Macallimow, waxbo kama jiraan oo waxaay kamid tahay, Fowdada uu Farmaajo ku burburi is yiri Jubaland ee Macallimow Guddoomiye ku xigeen ayuu Gedo oga ahaa Jubaland, Xilkaana way ka qaaday Mar hore!!
Tan ugu dambeeysa iyo eray yar oo aan adigu ku leeyahay. Ninyahow tayo dadeedna Reer Sharmaake ayaad u tahay oo waxaad tahay, ninkii Cawlyahan sheegadka u ahaa, isagoo Gedo joogo “Baardheere iyo Faaf-xadhuun” Farmaajana Jifo ayuu ila yahay wax uguma qaban kartide, tartiib is gaabi oo dadkaaga dhinac ka raac, yuusan dekano aadan ka bixi karin ku geline!!!!!!
JAMA saddexle says:
Farmaajo laba sano ayuu dagaal fool xun kula jirey JUBBALAND IYO PUNTLAND waxana wuu ka dheefi waayey wuu ku fashilmey ilaa dhuuso-mareeb laga keene intaas ayaa ugu filin bahdil. Labada maamul wamaanulo dhisan… waxba yanan la aaminin farmaako waayo waxuu garan waayey 3 sano iyo bar hadana garan maayo